Umjovo Isikhunta, Injection Molding, Plastic Isikhunta Maker China
Isikhunta intuthuko nombuzo-ERP
Isingeniso ukuze HKY
Kungani kufanele ukhethe HKY
Uhlu Izinsiza kusebenza
Izithuthi Ukupholisa uhlelo
Umklamo womkhiqizo Umhlahlandlela
Yaqalwa ngo-2005, HKY Isikhunta ingenye yokuncintisana kakhulu abakhiqizi Injection isikhunta kanye nezinkampani umjovo udini e Shenzhen, China. Sikhonza anhlobonhlobo izimboni kuhlanganise Interiors yezimoto, yezimoto Ukupholisa izinhlelo, electronics, izicelo ekhaya, ezempilo, amandla, izimboni kanye nokunye.
Nikeza ukufakwa isikhunta futhi Injection amasevisi udini
HKY Isikhunta, inkampani Injection isikhunta Chian, ikunikeza isixazululo esingcono kakhulu yezifiso Injection olubunjiwe izingxenye zesikhunta
Professional China ngokwezifiso Injection isikhunta futhi udini izinkampani nge IATF-16949 kutfolwa kwetitifiketi kanye ERP ukuphathwa izinhlelo
Thina nje kuphela akhiqize isikhunta futhi ukubunjwa izingxenye ngawe, kodwa futhi anganikeza izingxenye design, Plating, imidwebo, wokunyathelisa kwesikrini kanye nezinye izinsizakalo yokukhiqiza ezihlobene.
Sizimisele ukuqinisekisa ikhwalithi kanye nokwaneliseka amakhasimende ethu futhi ukuqinisekisa ukwaneliseka.
Wazi iliphi ikhambi
esifanelana neesd ibhizinisi lakho
CONTACT YETHU IPHROJEKTHI Elite
KHETHA A UKWENZA SERVICE
Ngo amaphrojekthi amaningi, ngaphezu izingxenye plastic, kukhona ingxubevange izingxenye, ezifana ezivamile aluminium ingxubevange wethu, i-zinc ingxubevange, titanium ingxubevange, lezi zingxenye ingxubevange futhi kudingeka ukuba ibunjwe. Ukuze ukunikeza amakhasimende ne isevisi kangcono, we sungula a professional die-thusi die ithimba ngo-2015 Manje, thina ezinqwabelene isipiliyoni ocebile ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende kakhulu.
Siye isihambile umjovo plastic udini imishini futhi eminingi umjovo udini umkhakha ithimba, 2 QC ochwepheshe shift ngalinye. Siphinde futhi sithumele batch lokuqala amasampuli ikhasimende ukuze ihlolwe. QC ivivinya amasampula ngokusebenzisa CMM, wokudlala, 2DMI, altimeter, vimba gauge, inaliti isilinganiso, L-square, caliper, micrometer, ubulukhuni nezinye izinto ukuhlolwa. Thumela imibiko izinga kumakhasimende ukuze ahlolwe, ezifana Fai, SPC, CPK, njll Zonke umsebenzi senza kuphela izinga okusezingeni ngokwezifiso Chinese umjovo ekubumbeni.
HKY Isikhunta has olutheni double umbala umjovo isikhunta nge izinhlelo ligijima, okuyinto livumela Ukukhetha lesifanele ezinhlobo umkhiqizo kanye nezindawo esangweni, okwenza ukuxhumana imibala emibili kwaba lula futhi esinembile. Ngaphezu kwalokho, ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende, thina zingakhiqiza yesibili inkonzo iraba ekubumbeni.
A yakhelwe kahle futhi ukucacisa ekhiqizwa isikhunta isihluthulelo umkhiqizo othe izingxenye ezinhle plastic. HKY ithimba has nakho ngokucebile Precision isikhunta okuklama, yokukhiqiza kusuka yonke le minyaka ukufunda, okukuvumela ukuba sikhonze amakhasimende ethu ku isikhunta wokwakha izingxenye ukuthi nge eyinkimbinkimbi nobukhulu balezi Friend izidingo.
Buka amasevisi ethu
KUNGANI KHETHA HKY Isikhunta
√ Nathi, ungagcina isikhathi nemali. Singabantu kwemboni, ukuba basebenzisane nathi ungagwema ikhomishana abadayisi
√ Ithimba lethu zobunjiniyela has olunzulu umkhakha isipiliyoni kanye namakhono okuphatha iphrojekthi, kanye lobuchwepheshe English kahle ukukhulumisana okuhle.
√ ukuhlangabezana ngokugcwele izindinganiso zakho izinga, zonke izingxenye isikhunta ukuthekelisa isikhunta ekhiqizwa ngokuhambisana DME, amazinga HASCO, ezifana Umhlahlandlela izikhonkwane, bushings, thimbles noma ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
√ Ngena isivumelwano non-ukudalulwa (Isivumelwano Non-Sokuveza) idokhumenti ukuvikela ulwazi lakho yephrojekthi asisoze ngedatha yakho nanoma iyiphi enye wesithathu.
√ DFM (design manufacturability) ukuhlaziya ingxenye ngayinye kanye ukuhlonza ezingaba izinkinga ingozi (ingxenye design nezinkinga isikhunta) ngaphambi noma balolonge design kanye nokukhiqiza
√ Ngokusho 2D imidwebo yekhasimende, bonke isikhunta ahambisana isitifiketi steel, isitifiketi ukwelashwa ukushisa, isikhunta test imingcele futhi full-scale umbiko nesilinganiso.
√ Sine engaphezu kwengu-20 nakho ku isikhunta design, ukufakwa isikhunta making, ababili-umbala isikhunta, Die Ekubunjweni, Injection udini Ukukhiqiza
√ Njalo impendulo amakhasimende ethu ngendlela esifike ngesikhathi futhi baxhumane ngokushesha njengoba abahlinzeki bendawo
√ iye babebambisene amakhasimende amaningi kuphrojekthi Injection isikhunta, okuyinto ngizibona zibaluleke kangakanani kwimisebenzi ehlukile like Izithuthi, Aerospace, Imishini, Zikagesi, Electronics, Okufakiwe, Imishini, njll
Ikheli Igumbi # 102, Isakhiwo # 50, Shu Tianpu Xin xing Imboni Zone B, Matian Street, Guang Ming District, Shen Zhen edolobheni, Guang Dong Isifundazwe, China, 518101
Ucingo +86 075523573733
Sicela ushiye imininingwane yakho yokuxhumana uma kukhona Custom Injection Isikhunta, Injection ukubumba Ukwenza amaphrojekthi kudingeka ocashunwe, ummeleli yethu uzokuthinta ngesikhathi esifanele.
Imikhiqizo Guide - Imikhiqizo ezifakiwe- Hot Amathegi- Sitemap.xml - AMP Ucingo
Plastic Injection Moulding Components, Plastic Isikhunta Injection, Plastic Injection Bottle Cap Mold, Mold For Plastic Injection,